Goobweyn - Wikipedia
Goobweyn waa deegaan magaalada kismaayo u jirto 15 km dhinaca waqooyi.waxaa mara dhulbaraha caalamka Waxaa dagan beeraleey iyo xoolo dhaqato.dadka beeraleyda waxaa kamid ah dalaga ay abuurtaan Masagada,Mooska,cambaha iyo dalagyo kale oo badan.
Waa deegaan tariikh fogleh waana degaan ku caanbaxsana waqtigii guumeystaha iyo ka horba ganacsiga dalaga iyo xiriirka ganacsi uu lalahaa ajaanibti imaan jirtay soomaaliya ee ganacsiga kala dhaxeeyay soomaaliya sida ganacsato carab ah iyo hindi. Waa deegaan qurux badan waxaana la sheegaa in tariikh ahaan ay ka facweyn tahy magaalada kismaayo. waxaa kamid ah qabiilada daga magaalada beesha shiikhaal wana beesha ogu badan sidokale waxaa jiro beelo kale la daga sida beesha tuni iyo jareer weyne. Dhawaan ayaa loo magacay Degmo waxaana u magacay madaxweyne ku xigeenka 2 aad ee Maamulka Jubbaland mudane Cabdiqaadir ( luga dheere). Waxaana loo dhisay Xarunta degmada. Degmada Goobweyn waxaa Gudoomiye degmo ka ah Cumar cabdulahi oo loo yaqaan Cumar hurow.
magaaladu waxay caan ku tahay bilicdeeda dabiicaga ah , baryihii danbe waxaa magaalada noqonaysay mid soo kobcaysa oo indhaha gobolka soo jiidatay , magaaladu waxay ka mid tahay magaaloyinka ugu qadiimsan jubboyinka Magaalada waxa Mara wabiga juba kaas biyaha Ku shuba bada waxy caan ku tahay geedaha Sida qumbaha magaalada waxa dhib ka so Gaaray dagaaldi sokeeye Wana Mel dhib bdn. Ka dhacday dadka dagan goobwayn wa dad Is jecl qalbi furan. Degmada Goobweyn waxa ay leedahy dugsiyada waxbarshada sida kuwa lagu barto Quraanka kariimka.sidokale degmada waxa ay lahaan jirtay Dugsiga Hoose iyo Dhexe ee Goobweyn.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Goobweyn&oldid=172860"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 22:56, 7 Febraayo 2018.